Neymar oo markale gudbiyay codsi uu ku dalbanayo kabtannimada – Gool FM
Neymar oo markale gudbiyay codsi uu ku dalbanayo kabtannimada
Byare January 16, 2017
(Brazil) 16 Jan 2017. Kaddib markii uu xulka Brazil ku hogaamiyay biladaha dahabka ee ciyaarihii Olympikada xagaagii 2016, Neymar ayaa iska soo dhiibay calaamada Kabtanka ee xulkiisa isagoona shaaciyay inuusan dooneyn inuu kabtan sii ahaado.
Balse tababaraha xulka lagu naaneyso Selecao ayaa iminka sheegaya in Neymar uu soo gudbiyay codsi uu ku doonayo in markale loogu dhiibo Kabtanka xulka Brazil.
“Waqtigaa, waxaan waydiistay isaga inuu isoo ogeysiiyo marka uu dareemo inuu koray uuna diyaar u yahay inuu markale xirto Kabtanka,”Tababare Tite ayaa sidaa u sheegay Extra.
“Kabtanka ayuu markale noqon doonaa.
“Dhaliyaro nimadiisa ima dhibeyso. Waan qoslaa marka ay dadku Neymar la bar-bar dhigaan Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi maadaama ay yihiin ciyaartooy ka yimid jiil ka duwan kuwaa oo kol horeba gaaray halka ugu sarreysa, halka Neymar uusan weli gaarin.”.
Muxuu Zidane ka yiri guul daradii xalay ka soo gaartay Sevilla taa oo soo af-jirtay Rikoodhkii guul darro la’aanta Real Madrid?
Dagaalkii Jose Mourinho iyo Jurgen Klopp oo ku soo gabo-gaboobay is gacan qaad...(Maxaa marka hore la isku maagay?)+SAWIRRO